Onyankopɔn Atirimpɔw Ma Nnipa​—Sɛnea Wɔdaa no Adi | Onyankopɔn Ahenni
Yehowa da n’atirimpɔw adi nkakrankakra, nanso wɔn a wosuro no nkutoo na ɔma wɔte n’atirimpɔw ase
1, 2. Ɔkwan bɛn so na Yehowa ada n’atirimpɔw adi akyerɛ adesamma?
SƐ AWOFO a wodwen wɔn mma ho resusuw abusua no mu nsɛm ho a, wɔma wɔn mma nso tena mu bi. Nanso, wɔhwɛ yiye wɔ nsɛm dodow a wɔne wɔn susuw ho no ho. Nsɛm a wonim sɛ wɔn mma no betumi ate ase nkutoo na wɔne wɔn susuw ho.
2 Saa ara na Yehowa ada n’atirimpɔw adi nkakrankakra akyerɛ adesamma. Nanso, ɔyɛ saa wɔ bere a ɛfata nkutoo mu. Momma yensusuw Yehowa Ahenni no ho nokwasɛm a wada no adi fi tete besi nnɛ no mu kakra ho nhwɛ.
Dɛn na Ɛmaa Ahenni no Ho Behiae?
3, 4. So Yehowa hyehyɛɛ sɛnea adesamma bɛyɛ wɔn ade too hɔ? Kyerɛkyerɛ mu.
3 Mfiase no, na Mesia Ahenni no nka Yehowa atirimpɔw ho. Dɛn ntia? Efisɛ na ɛnka Yehowa nhyehyɛe ho sɛ adesamma bɛsɔre atia ne tumidi; anyɛ yiye koraa no, bere a ɔbɔɔ nnipa no, ɔmaa wɔn kwan sɛ wobetumi apaw nea wɔpɛ. Enti, ɔkaa nea enti a ɔbɔɔ adesamma no kyerɛɛ Adam ne Hawa. Ɔkae sɛ: “Monwo na monnɔɔso na monhyɛ asase so mã na munni so.” (Gen. 1:​28) Nea na Yehowa rehwehwɛ afi wɔn hɔ ne sɛ wobenya obu ama ne gyinapɛn a ɛfa papa ne bɔne ho no. (Gen. 2:​16, 17) Ná anka Adam ne Hawa betumi akɔ so adi nokware. Sɛ wɔne wɔn asefo dii nokware a, anka yɛrenhia Kristo Ahenni no sɛ emmedi Onyankopɔn atirimpɔw ho dwuma. Anka saa bere yi, nnipa a wɔyɛ pɛ a wɔn nyinaa resom Yehowa na wɔahyɛ asase so mã.
4 Satan, Adam, ne Hawa atuatew no amma Yehowa anyi n’adwene amfi sɛnea na wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛma nnipa a wɔyɛ pɛ atena asase so no so. Mmom no, Yehowa yɛɛ nsakrae wɔ ɔkwan a ɔbɛfa so ama n’atirimpɔw abam no ho. Sɛ keteke betumi adu baabi a ɛrekɔ a, gye sɛ ɛfa ɔkwan pɔtee bi so, nanso Yehowa atirimpɔw nte sɛ keteke, efisɛ nnipa bi betumi ayɛ biribi ma keteke ahwe ase. Nanso, Yehowa de, sɛ ɔka sɛ ɔbɛyɛ biribi a, tumi biara nni amansan yi mu a ebetumi asiw no kwan. (Monkenkan Yesaia 55:​11.) Sɛ biribi pɛ sɛ esiw Yehowa kwan a, ɔfa ɔkwan foforo so. * (Ex. 3:​14, 15) Sɛ ohu sɛ ɛho hia a, ɔda ɔkwan foforo a ɔbɛfa so ama n’atirimpɔw abam no adi kyerɛ ne nkoa anokwafo.
5. Dɛn na Yehowa yɛe de dii atuatew a ɛsɔree wɔ Eden no ho dwuma?
5 Yehowa bɔɔ ne tirim sɛ ɔde Ahenni no besi hɔ de adi atuatew a ɛkɔɔ so wɔ Eden no ho dwuma. (Mat. 25:​34) Bere a na ayɛ sɛ nea adesamma anidaso asa no, Yehowa fii ase kyerɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ama nnipa asi wɔn dedaw mu ne sɛnea obesiesie ɔhaw a Satan kɔfa bae bere a na ɔrebɔ mmɔden sɛ obenya tumi no. (Gen. 3:​14-19) Ɛno mpo no, Yehowa anna Ahenni no ho nsɛm nyinaa adi prɛko pɛ.
Yehowa Fii Ase Daa Ahenni no Ho Nokwasɛm Adi
6. Ɛbɔ bɛn na Yehowa hyɛe, nanso dɛn na wanna no adi?
6 Nkɔmhyɛ a edi kan no mu na Yehowa hyɛɛ bɔ sɛ ‘aseni’ bi bɛpɛtɛw ɔwɔ no ti. (Monkenkan Genesis 3:​15.) Nanso, saa bere no, wankyerɛ nea ɔyɛ saa aseni no ne ɔwɔ no aseni no. Nokwasɛm ne sɛ, bɛyɛ mfe 2,000 akyi ansa na Yehowa de saa asɛm no ho nkyerɛkyerɛmu pii rema. *
7. Dɛn nti na Yehowa paw Abraham, na asuade titiriw bɛn na yenya fi mu?
7 Awiei koraa no, Yehowa paw Abraham sɛ ne mu na aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no befi aba. Nea enti a wɔpaw Abraham ne sɛ ‘ɔyɛɛ aso maa Yehowa.’ (Gen. 22:​18) Yenya asuade titiriw bi wɔ saa asɛm yi mu. Ɛne sɛ, Yehowa da n’atirimpɔw adi kyerɛ wɔn a wosuro no no nkutoo.​—Monkenkan Dwom 25:14.
8, 9. Aseni a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no ho nokwasɛm bɛn na Yehowa daa no adi kyerɛɛ Abraham ne Yakob?
8 Bere a Yehowa nam ɔbɔfo bi so rekasa akyerɛ n’adamfo Abraham no, oyii saa nokwasɛm titiriw yi a ɛfa aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no adi nea edi kan koraa sɛ: Aseni no bɛyɛ onipa. (Gen. 22:​15-17; Yak. 2:​23) Nanso, ɔkwan bɛn na na saa onipa yi bɛfa so apɛtɛw ɔwɔ no ti? Hena ne ɔwɔ no? Ná nsɛm bi a wɔbɛda no adi akyiri yi bɛma yɛanya saa nsɛmmisa no ho mmuae.
9 Yehowa kae sɛ aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no befi Abraham banana Yakob​—ɔbarima a ɔdaa gyidi kɛse adi wɔ Onyankopɔn mu no​—mu na aba. (Gen. 28:​13-22) Yehowa nam Yakob so daa no adi sɛ Onii a wɔahyɛ ne ho bɔ no befi Yakob ba Yuda abusua mu. Yakob hyɛɛ nkɔm sɛ wɔde “ahempoma”​—poma a ɛkyerɛ tumidi​—bɛma Yuda aseni no, “na ɔno na aman betie no.” (Gen. 49:​1, 10) Yehowa nam saa asɛm a ɔkae no so kyerɛe sɛ Onii a wɔahyɛ ne ho bɔ no bedi ade sɛ ɔhene.
10, 11. Dɛn nti na Yehowa daa n’atirimpɔw adi kyerɛɛ Dawid ne Daniel?
10 Yuda nna no akyi bɛyɛ mfe 650 no, Yehowa daa n’atirimpɔw ho nsɛm pii adi kyerɛɛ Ɔhene Dawid a ofi Yuda abusua mu no. Yehowa kaa Dawid ho asɛm sɛ ɔyɛ “ɔbarima a ne koma da no so.” (1 Sam. 13:​14; 17:​12; Aso. 13:​22) Esiane sɛ na Dawid suro Onyankopɔn nti, Yehowa ne no yɛɛ apam, na ɔhyɛɛ no bɔ sɛ n’aseni bedi hene afebɔɔ.​—2 Sam. 7:​8, 12-16.
11 Eyi akyi bɛyɛ mfe 500 no, Yehowa nam odiyifo Daniel so daa afe pɔtee a na Nea Wɔasra No, anaa Mesia no, bepue wɔ asase so no adi. (Dan. 9:​25) Ná Daniel yɛ obi a Yehowa ‘pɛ n’asɛm paa.’ Dɛn ntia? Efisɛ na Daniel bu Yehowa paa, na ɔkɔɔ so som no.​—Dan. 6:​16; 9:​22, 23.
12. Dɛn na Yehowa ka kyerɛɛ Daniel sɛ ɔnyɛ, na dɛn ntia?
12 Ɛwom sɛ Yehowa maa adiyifo anokwafo bi te sɛ Daniel kyerɛw aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ a ɔne Mesia no ho nsɛm de, nanso na bere nnui sɛ Yehowa ma n’asomfo te nsɛm a ɔma wɔkyerɛwee no nyinaa ase. Sɛ nhwɛso no, bere a wɔmaa Daniel nyaa Onyankopɔn Ahenni a wɔde asi hɔ no ho anisoadehu no, Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ ɔnsɔ nkɔmhyɛ no ano nkosi bere a wɔahyɛ no. Sɛ saa bere no du a, nimdeɛ a edi mũ “bɛdɔɔso.”​—Dan. 12:4.
Yehowa maa mmarima anokwafo bi te sɛ Daniel kyerɛw Mesia Ahenni no ho nsɛm
Yesu Ma Yehuu Onyankopɔn Atirimpɔw
13. (a) Hena ne aseni a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu ma yehuu nea nkɔmhyɛ a ɛwɔ Genesis 3:​15 no kyerɛ?
13 Yehowa ma yehui pefee sɛ, Yesu ne aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no, Dawid abusua no muni a obedi ade sɛ Ɔhene no. (Luka 1:​30-33; 3:​21, 22) Bere a Yesu fii ne som adwuma ase no, na ɛte sɛ nea hann bi apue a ɛbɛma adesamma anya Onyankopɔn atirimpɔw ho nimdeɛ. (Mat. 4:​13-17) Sɛ nhwɛso no, Yesu frɛɛ Ɔbonsam sɛ “owudifo” ne “atoro agya,” na ɛno ma yehu nea “ɔwɔ” a wɔaka ne ho asɛm wɔ Genesis 3:​14, 15 no gyina hɔ ma no no pefee. ( Yoh. 8:​44) Wɔ anisoadehu a Yesu maa Yohane nyae mu no, Yesu ma yehui sɛ “ɔwɔ dedaw” no ara ne “nea wɔfrɛ no Ɔbonsam ne Satan” no. * (Monkenkan Adiyisɛm 1:1; 12:9.) Wɔ saa anisoadehu no ara mu no, Yesu kyerɛe sɛ awiei koraa no, ɔno a ɔyɛ aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no bɛma nkɔm a wɔhyɛe wɔ Eden no abam, na wayi Satan afi hɔ koraa.​—Adi. 20:​7-10.
14-16. So asuafo a wɔtenaa ase wɔ asomafo no bere so no tee nokwasɛm ahorow a Yesu daa no adi kyerɛɛ wɔn no ase yiye bere nyinaa? Kyerɛkyerɛ mu.
14 Sɛnea yehui wɔ nhoma yi Ti 1 no, Yesu kaa Ahenni no ho nsɛm pii. Nanso, ɛnyɛ bere nyinaa na ɔkyerɛkyerɛɛ ɛho nsɛm pii a na asuafo no pɛ sɛ wohu no mu kyerɛɛ wɔn. Bere mpo a Yesu kyerɛkyerɛɛ nsɛm pɔtee bi mu kɔɔ akyiri no, Kristo akyidifo no ante ase kosii bere bi ansa na wɔrete nokwasɛm ahorow a na wɔn Wura no ada no adi akyerɛ wɔn no ase yiye. Emu bi wɔ hɔ a, mfehaha pii twaam ansa na wɔrete ase. Momma yensusuw nhwɛso bi ho nhwɛ.
15 Wɔ afe 33 Y.B. mu no, Yesu ma ɛdaa adi pefee sɛ wobeyi wɔn a wɔne Onyankopɔn Ahenni no so Hene no bedi ade no afi asase so na wɔde wɔn akɔ soro sɛ honhom abɔde. Nanso, n’asuafo no ante saa asɛm yi ase amonom hɔ ara. (Dan. 7:​18; Yoh. 14:​2-5) Wɔ saa afe no ara mu no, Yesu maa mfatoho ahorow de kyerɛe sɛ sɛ ɔkɔ soro a, bere tenten bi betwam ansa na wɔde Ahenni no asi hɔ. (Mat. 25:​14, 19; Luka 19:​11, 12) Asuafo no ante saa asɛntitiriw yi ase, enti bere a wonyan Yesu fii awufo mu akyi no, wobisaa no sɛ: “Saa bere yi na wode ahenni no resan asi hɔ ama Israel anaa?” Nanso, saa bere no, Yesu anka Ahenni no ho asɛm biara bio. (Aso. 1:​6, 7) Yesu san kyerɛkyerɛe sɛ obenya “nguan foforo” a wɔnka ne mfɛfo a ɔne wɔn bedi ade a wɔyɛ “nguankuw ketewa” no ho. ( Yoh. 10:​16; Luka 12:​32) Kristo akyidifo no ante saa akuw abien yi ho asɛm no ase yiye kosii bere a wɔde Ahenni no sii hɔ wɔ afe 1914 mu akyi.
16 Ná Yesu wɔ nsɛm pii a anka obetumi aka akyerɛ n’asuafo no bere a na ɔne wɔn wɔ asase so no, nanso ohui sɛ wɔrentumi nsoa saa bere no. ( Yoh. 16:​12) Akyinnye biara nni ho sɛ, Yesu ma wohuu Ahenni no ho nsɛm pii wɔ asomafo no bere so. Nanso, na bere nnya nnui sɛ nimdeɛ a ɛte saa bɛdɔɔso.
Nimdeɛ a Edi Mũ Adɔɔso Wɔ “Awiei Bere” Yi Mu
17. Dɛn na ɛsɛ sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔte nokwasɛm ahorow a ɛfa Ahenni no ho ase no yɛ, na dɛn bio na ɛsɛ sɛ wɔyɛ ka ho?
17 Yehowa hyɛɛ Daniel bɔ sɛ wɔ “awiei bere no” mu no, nnipa pii “bɛtweetwee” nhoma a wɔasɔ ano no mu, na Onyankopɔn atirimpɔw ho “nimdeɛ a edi mu” bɛdɔɔso. (Dan. 12:4) Ɛsɛ sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wonya saa nimdeɛ no yere wɔn ho na ama wɔatumi anya bi. Nhoma bi ka sɛ, Hebri adeyɛ asɛm a wɔkyerɛɛ ase ‘tweetwee mu’ no kyerɛ sɛ obi atɔ ne bo ase paa rehwehwɛ nhoma bi mu yiye. Nanso, ɛmfa ho sɛnea yɛbɛhwehwɛ Bible no mu yiye biara no, sɛ Yehowa ammoa yɛn a, yɛrentumi nte Ahenni no ho nokwasɛm no ase yiye.​—Monkenkan Mateo 13:11.
18. Ɔkwan bɛn so na wɔn a wosuro Yehowa no ada gyidi ne ahobrɛase adi?
18 Sɛnea Yehowa daa Ahenni no ho nokwasɛm no adi nkakrankakra ansa na afe 1914 reba no, saa ara na ɔreyɛ wɔ awiei bere yi mu. Sɛnea yebehu wɔ nhoma yi Ti 4 ne Ti 5 no, bɛboro mfe 100 a atwam no, ɛho behiae mpɛn pii sɛ Onyankopɔn nkurɔfo yɛ nsakrae wɔ ntease a na wɔwɔ no mu. So eyi kyerɛ sɛ Yehowa ntaa wɔn akyi anaa? Ɛnte saa koraa! Ɔtaa wɔn akyi. Dɛn nti na yɛreka saa? Efisɛ wɔn a wosuro Yehowa no ada su ahorow abien a Yehowa ani gye ho paa adi: ɛno ne gyidi ne ahobrɛase. (Heb. 11:6; Yak. 4:6) Yehowa asomfo gye di sɛ bɔhyɛ ahorow a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu no nyinaa bɛbam. Sɛ wogye tom sɛ wɔante sɛnea na saa bɔhyɛ ahorow no bɛbam pɛpɛɛpɛ no ase yiye a, na wɔreda no adi sɛ wɔwɔ ahobrɛase. Asɛm a ɛbae wɔ March 1, 1925, Ɔwɛn-Aban no mu no ma yehu sɛ na wɔwɔ ahobrɛase. Ɛkae sɛ: “Yenim sɛ Awurade ankasa kyerɛ n’asɛm ase, enti ɔbɛkyerɛ n’Asɛm no ase ama ne nkurɔfo wɔ ɔkwan a n’ankasa pɛ so ne n’ankasa bere mu.”
‘Awurade bɛkyerɛ n’Asɛm no ase ama ne nkurɔfo wɔ ɔkwan a n’ankasa pɛ so ne n’ankasa bere mu’
19. Seesei, dɛn na Yehowa ama yɛate ase, na dɛn ntia?
19 Bere a wɔde Ahenni no sii hɔ wɔ afe 1914 mu no, na ntease a Onyankopɔn nkurɔfo wɔ wɔ sɛnea nkɔmhyɛ a ɛfa Ahenni no ho bɛbam no nnya nnii mũ. (1 Kor. 13:​9, 10, 12) Esiane sɛ na yɛn ho pere yɛn sɛ yebehu Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow mmamu nti, mmere bi a atwam no yɛkekaa nsɛm bi a amma mu. Mfe bi akyi no, yɛabɛte asɛm bi a wɔkae wɔ Ɔwɛn-Aban a yɛaka ho asɛm wɔ nkyekyɛm dunwɔtwe mu no ase yiye. Wɔkae sɛ: “Sɛ yebetumi ate nkɔmhyɛ bi ase a, gye sɛ ɛbam anaasɛ efi ase sɛ ɛrebam, enti ɛyɛ papa sɛ yɛrempere yɛn ho nkyerɛ nkɔmhyɛ bi ase kosi saa bere no.” Seesei a yɛadu akyiri wɔ wiase awiei bere yi mu no, Ahenni no ho nkɔmhyɛ pii anya mmamu, na ebi nso gu so renya mmamu. Esiane sɛ Onyankopɔn nkurɔfo brɛ wɔn ho ase na wɔpɛ sɛ wɔteɛteɛ wɔn nti, Yehowa ama ntease a yɛanya wɔ n’atirimpɔw ho no adi mũ. Nimdeɛ a edi mũ adɔɔso ampa!
Ntease Foforo a Onyankopɔn Nkurɔfo Nya Sɔ Wɔn Hwɛ
20, 21. Ntease foforo a Kristofo a na wɔwɔ asomafo no bere so nyae no kaa wɔn dɛn?
20 Sɛ Yehowa ma yenya nokware no ho ntease foforo a, ɛsɔ nea ɛwɔ yɛn koma mu hwɛ. So gyidi ne ahobrɛase a yɛwɔ bɛma yɛagye nsakrae a ɛba no atom? Kristofo a wɔtenaa ase wɔ Yesu awo akyi bɛyɛ mfe 50 no hyiaa sɔhwɛ a ɛte saa. Sɛ nhwɛso no, fa no sɛ na woyɛ Yudani Kristoni saa bere no. Ná wowɔ obu kɛse paa ma Mose Mmara no, na na wohoahoa wo ho sɛ woyɛ Israelni. Afei, mo nsa aka nkrataa a honhom kaa ɔsomafo Paulo ma ɔkyerɛwee no, na ɛreka sɛ Mose Mmara no nyɛ adwuma bio, Yehowa apo honam fam Israelfo, na ɔreboaboa honhom fam Israelfo a wɔyɛ Yudafo ne Amanaman mufo ano asi honam fam Israelfo ananmu. (Rom. 10:​12; 11:​17-24; Gal. 6:​15, 16; Kol. 2:​13, 14) Dɛn na anka wobɛyɛ?
21 Kristofo a na wɔwɔ ahobrɛase no gyee nkyerɛkyerɛmu a honhom kaa Paulo ma ɔde mae no toom, na Yehowa hyiraa wɔn. (Aso. 13:​48) Afoforo annye nsakrae no antom, na na wɔpɛ sɛ wɔkɔ so kura ntease dedaw a wɔwɔ no mu. (Gal. 5:​7-12) Sɛ saa nkurɔfo no ansesa wɔn adwene a, na wɔrennya hokwan nkɔka Kristo ho ne no nni ade.​—2 Pet. 2:1.
22. Wote nka dɛn wɔ nsakrae a wɔayɛ wɔ Onyankopɔn atirimpɔw ho ntease a wɔama emu ada hɔ fann no ho?
22 Nnansa yi, Yehowa ama Ahenni no ho ntease a yɛwɔ no mu ada hɔ fann. Sɛ nhwɛso no, waboa yɛn ma yɛabehu bere a wobeyiyi wɔn a wɔyɛ Ahenni no manfo no afi wɔn a wontie asɛmpa no mu sɛnea wɔpaapae nguan ne mmerekyi mu no. Wasan nso ama yɛahu bere a wɔbɛboaboa nnipa 144,000 no nyinaa ano awie, nea Ahenni no ho mfatoho a Yesu yɛe no kyerɛ, ne bere a wobenyan wɔn a wɔasra wɔn no mu nea otwa to koraa ma wakɔ soro. * Woyɛ w’ade dɛn wɔ nkyerɛkyerɛmu a ɛte saa ho? So ɛhyɛ wo gyidi den? So wubu no sɛ ɛyɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Yehowa gu so rekyerɛkyerɛ ne nkurɔfo a wɔwɔ ahobrɛase no? Nsɛm a edi hɔ wɔ nhoma yi mu no bɛma woanya ahotoso koraa sɛ Yehowa da n’atirimpɔw adi nkakrankakra kyerɛ wɔn a wosuro no no ampa.
^ nky. 4 Onyankopɔn din no fi Hebri adeyɛ asɛm bi a ɛkyerɛ “bɛyɛ” mu. Yehowa din no kyerɛ sɛ ɔma ne bɔhyɛ ahorow ba mu. Hwɛ adaka a n’asɛmti ne “Nea Onyankopɔn Din Kyerɛ,” a ɛwɔ kratafa 43 no.
^ nky. 6 Ɛnnɛ, ɛwom sɛ, saa bere yi bɛyɛ yɛn ani so tenten de, nanso ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ bere bi na nnipa nyin kyɛ; efi Adam so besi Abraham so yɛ awo ntoatoaso anan pɛ. Noa papa Lamek bɛtoo Adam. Noa ba Sem bɛtoo Lamek. Abraham bɛtoo Sem.​—Gen. 5:​5, 31; 9:​29; 11:​10, 11; 25:7.
^ nky. 13 Wɔde edin “Satan” di dwuma mpɛn 18 wɔ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu bere a ɛreka obi pɔtee ho asɛm. Nanso, wɔ Kristofo Hela Kyerɛwsɛm no mu de, wɔde edin “Satan” di dwuma bɛboro mpɛn 30. Enti, Hebri Kyerɛwnsɛm no anka Satan ho nsɛm pii, na mmom ɛtwee adwene sii nea ɛbɛma yɛahu onii a ɔyɛ Mesia no so. Bere a Mesia no bae no, ɔma yehuu onii a ɔyɛ Satan no pefee, na yehu eyi wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu.
^ nky. 22 Sɛ wopɛ nsakrae a wɔayɛ wɔ ntease a yɛwɔ mu ho nkyerɛkyerɛmu a, hwɛ Ɔwɛn-Aban a edidi so yi mu: October 15, 1995, kratafa 23-28; January 15, 2008, kratafa 20-24; July 15, 2008, kratafa 17-21; July 15, 2013, kratafa 9-14.
Mfiase no, so na Mesia Ahenni no ka Onyankopɔn atirimpɔw ho? Kyerɛkyerɛ mu.
Ɔkwan bɛn so na Yesu ma yehuu Ahenni no?
Sɛ yɛbɛkɔ so agye adi sɛ Ahenni no wɔ hɔ ampa a, su ahorow bɛn na ɛsɛ sɛ yenya?
YEHOWA DA N’ATIRIMPƆW ADI NKAKRANKAKRA
Afe 4026 A.Y.B.
Akyiri yi, Yehowa hyɛɛ aseni bi a ɔbɛpɛtɛw ɔwɔ no ti no ho bɔ
Aseni no bɛyɛ onipa a ofi Abraham abusua mu
Afe 1858 A.Y.B.
Bɛyɛ afe 1711 A.Y.B.
Wɔhyɛɛ bɔ sɛ aseni no bɛyɛ ɔhene
Bɛyɛ afe 1070 A.Y.B.
Ná aseni no befi Ɔhene Dawid abusua mu, na obedi hene afebɔɔ
Bɛyɛ afe 539 A.Y.B.
Yehowa nam odiyifo Daniel so daa afe pɔtee a na aseni no, anaa Mesia no, bepue wɔ asase so no adi
Yesu daa no adi pefee sɛ wobeyi wɔn a wɔne Onyankopɔn Ahenni no so Hene no bedi ade no afi asase so na wɔde wɔn akɔ soro sɛ honhom abɔde
Afe 1914 Y.B.
Ahenni no ho nimdeɛ fi ase dɔɔso